Fitsipika kendrena amin'ny tanjon'ny sputtering magnetut
Fitsipika momba ny sputter target magnetron sputtering:
Ny sahan'andriamby orthogonal sy ny sahan'aratra dia nampiana eo anelanelan'ny tanjona tratrarina (cathode) ary ny anoda, ary ny entona tsy mitaky (matetika Ar gazy) dia fenoina ao amin'ny efi-trano avo. Mamorona ny andriamby maharitra 250-350 ambonin'ireo fitaovana kendrena. Ny sahan'andriamby Gaussianina, ary ny sehatry ny herinaratra avo lenta dia mamorona saha elektromagnetika orthogonal.
Eo ambanin'ny asan'ny sahan'aratra, Ny gazy Ar dia mihombo ho lasa ion sy electron tsara. Misy voltatra avo lenta tsy mandeha tsara ampiharina amin'ilay lasibatra. Ny elektrôna avoaka avy amin'ny kendrena dia voakasiky ny sahan'andriamby ary mitombo ny fahafaha-mihombo ny entona miasa, mamorona plasma avo lenta akaikin'ny cathode. Eo ambanin'ny asan'ny herin'i Lorentz, Ny ions Ar dia mihazakazaka mankany amin'ny tampon'ny kendrena ary manafika ny velaran'ny tanjona amin'ny hafainganam-pandeha avo, ka ny atôma mivoaka amin'ny tanjona dia manaraka ny fitsipiky ny fiovam-po ary manidina lavitra ny tanjona kendrena miaraka amin'ny angovo kinetika avo kokoa. Fametrahana substrate amin'ny sarimihetsika.
Ny famafazana Magnetron dia mizara roa amin'ny ankapobeny: fantson-tributary sy fantsom-peo matetika. Ny fitsipiky ny fitaovam-pitenenan'ny tributary dia tsotra, ary ny tahan'ny azy koa dia haingana rehefa mandrora metaly..Mihalehibe kokoa ny laharan-taratasim-pandrefesana radio. Ho fanampin'ny sputtering fitaovana conductive, ireo fitaovana tsy mitarika dia azo esorina koa. Mandritra izany fotoana izany, Izy io koa dia afaka mitondra sputtering mihetsika mba hanomanana akora fitambarana toy ny oksida, nitrida, sy karbida..Raha ampitomboina ny refin'ny radio matetika, lasa mikororohana plasma mikraoba. Amin'izao, résonance cyclotron elektronika (ECR) ny mikraoba mikraoba karazana microwave dia matetika ampiasaina..
Précédent: Introduction to target types and application fields
Manaraka: Ny tsy fitoviana eo amin'ny takelaka fanamainana sy ny firakotra optika